नेपालमा ग्रेटर नेपालको कुरा उठ्दा बेलायत सरकारले कसरी हेर्दैछ? कृपया भिडियो पूरा हेर्नुहोस (जय नेपाल लेखर सेयर गराैं) | Public 24Khabar
Home News नेपालमा ग्रेटर नेपालको कुरा उठ्दा बेलायत सरकारले कसरी हेर्दैछ? कृपया भिडियो पूरा...
नेपालमा ग्रेटर नेपालको कुरा उठ्दा बेलायत सरकारले कसरी हेर्दैछ? कृपया भिडियो पूरा हेर्नुहोस (जय नेपाल लेखर सेयर गराैं)
तपाईंले भोलि चैत्र २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गर्नु हुँदैछ भन्ने कुराले मेरा मनमा एउटा जिज्ञासा र अनेक तरङ्ग उठेका छन् । तपाईं किन भारत जान हतारिनुभयो अनि चीन जाने विषयलाई तपाईंले किन प्राथमिकता दिनुभएन ? भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न जाँदै छु भनेर तपाईंले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालविरुद्ध गरेको नाकाबन्दीलाई आज आएर किन अनुमोदन गर्नुभयो ?
२०७२ सालमा भारतले गरेको ६ महिना लामो नाकाबन्दीको बेला तपाईंलाई नेपाली जनताले दिएको समर्थन र त्यसबाट आर्जित राष्ट्रवादी व्यक्तित्वको प्रभावले नेकपा (एमाले) संसद्मा सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेको केही समय बित्न नपाउँदै भारत जान हतारिएबाट तपाईंले नेपाली जनताको राष्ट्रवादी अडानमाथि निर्मम प्रहार गर्नुभएको अनुभूति धेरैलाई भएको छ । तपाईंले नाकाबन्दीका बेला लिएको अडानको हिमशिला तपाईंको पैतालामुनि यसरी पग्लिएको छ कि त्यसले आफ्नो आकार पूरै गुमाइसकेको छ । तर तपाईं अब भारत जानबाट आफूलाई रोक्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न । त्यसैले म आज तपाईंका कानमा दुई तीनवटा विषयका कुरा सुनाउने धृष्टता गर्दछु ।
दोस्रो कुरा, कालापानीमा भारतीय अर्धसैनिक बल तैनाथ रहनु नेपालको स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण हो । त्यो नेपाली भूभाग हो । त्यसैले संयुक्त वक्तव्यमा त्यहाँबाट भारतीय अर्ध सैनिक बल तत्काल हट्ने बुँदा समावेश गर्न नभुल्नुहोस् । तेस्रो कुरा, आफ्ना समकक्षीसँग अब उप्रान्त नेपाल गोर्खा भर्ती बन्द गर्न चाहन्छ भन्ने हिम्मत गर्नुहोस् । हाम्रा जवान युवा भारतलाई बेचेर हाम्रो स्वाभिमान उँचो रहँदैन । भारतले गोर्खा सेनालाई नेपालको शत्रु राष्ट्र नरहेका चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश विरुद्ध प्रयोग गरिसकेको छ भने कुनै दिन नेपाल विरुद्ध पनि प्रयोग नगर्ला भन्न सकिन्न ।
Previous articleदु’खद घटना: शनिबार बिहानै काठमाडौँ जाँदै गरेको बस र ट्रक ठो’क्किँदा तीनजनाको मृ’ त्यु
Next articleअनिता र बिनोदको बुबा पहिलोपटक मिडियामा; अस्पतालमै चल्यो रुवा*वासी (भिडियो सहित)